လိုင်းပေါ်မှာ ကျွန်တော်အမြဲပဲ အားလုံးကို သိတာလေးတွေပြောပြ တတ်နိုင်တာလေးတွေကူညီနဲ့ပေါ့ဗျာ။ အဲ့လိုနဲ့အချိန်တော်တော်များများကို သူငယ်ချင်းများအတွက် ဖဲ့ပေးလိုက်မိတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားတစ်လုံးတောင်မရခဲ့တာ တော်တော်များသွားပါပြီ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က အစအနောက်သန်တယ်။ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာယူသုံး မလိုအပ်တဲ့အချိန် ချောင်ထဲကိုထိုးထားတတ်တဲ့ လူတွေရဲ့အကျင့်တွေကိုလဲ တော်တော်များများကိုတွေ့လိုက်မိတယ်ဗျ သိလား။ သူငယ်ချင်း တို့လဲ အားလုံးကို တစ်တန်းထဲ မထားကြနဲ့ဗျသိလား။
အခုတစ်လော ပရဟိတ အလုပ်တွေနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေတာနဲ့ပဲ ကျွန်တော် ပို့စ်အသစ်တွေတင်တာကို ခဏနားထားရတယ်။ နောက်ရက်တွေကနေပြီးတော့ စပြီးရေးတော့မှာပါ။ အားလုံးအားပေးကြပါဦးလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဘလောက်လေးတွေကိုတောင် သွားမလည်ဖြစ်ဘူးဗျသိလား။ အခုတော့ လူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ဒေသကို မြင်ခွင့်ရလိုက်တာတော့ ကောင်းသွားတာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ ကျွန်တော် ကျေးဇူးအတင်ခံချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အပေါ်ကို နားလည်မှုတစ်ခုယူပေးဖို့ပါ။ ကျွန်တော်ဟိုတစ်နေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ ရှင်းပြပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ သူမေးတာ တော်တော်များများကိုဖြေပေးလိုက်တယ်။ အချိန် ၂ နာရီကျော်ကျော်လောက်ကြာသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ရရှိလိုက်တာကတော့ ပညာစမ်းကြည့်တာပါတဲ့။ ကျွန်တော် အရမ်းဒေါသဖြစ်မိတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့်မှာ မအားလပ်တဲ့ကြားထဲကနေ ဖဲ့ပေးလိုက်မိတဲ့ အချိန်တွေအတွက် အရမ်းကိုထိခိုက်မိတာပါ။ ကျေးဇူးမတင်ချင်နေပါ။ ကျေးဇူးမကန်းကြပါစေနဲ့လို့ပြောချင်တာပါ။ ကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ထက် တတ်ကျွမ်းတဲ့သူတွေ အင်တာနက်မှာ တစ်ပုံကြီးပါ။ ကျွန်တော်က အခုမှ လေ့လာဆဲ ဘလောက်ဂါတစ်ယောက်ပါ။ ၃ လဆိုတဲ့ကာလလေးကို ကျော်ဖြတ်မိတာ ရက်ပိုင်းပဲရှိပါသေးတယ်။ တစ်ခြားသူတွေနဲ့လဲ ကိုမေးချင်တာမေးပြီးရင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကို commant လေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ cbox လေးထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေးပေးခဲ့ကြဖို့ အကြံဥာဏ်ပေးချင်တာပါ။ ကျွန်တော်ဆိုရင် ဘယ်နေရာက ပို့စ်ကိုပဲကြည့်ကြည့် အမြဲရေးပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လက်တွဲပြီးခေါ်ချင်တာပါ။ အားလုံးကို အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာနားလည်စေချင်တယ်။ ဒါကျွန်တော့်ဆန္ဒပါ။
Posted by ညီနေမင်း at 8:11 PM
Labels: General ထွေထွေ
နေ့အိပ်မက် January 12, 2009 at 2:52 AM
ဖစ်မှဖစ်ရလေ... စိတ်မပျက်ပါနဲ့.. လူတွေဆိုတာ ဒီလိုပဲလေ.. အကောင်းဆုံးက မကူညီဘဲ နေနိုင်ရင်နေ.. မနေနိုင်လို့ ကူညီမိရင်လည်း ဘာတုံ့ပြန်မှုကိုမှမစဉ်းဘဲ ကူညီရင် နည်းနည်းဖြေသာမယ်နဲ့တူပါတယ်... ကိုညီနေမင်းကို ကျေးဇူးတင်နေကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်.. မမအဖြူရောင်တို့၊ မမကောင်းကင်ပြာတို့လေ...၊ စိတ်မပျက်ပါနဲ့နော်.. ပို့စ်အသစ်တွေရေးပါ.. စောင့်ဖတ်နေပါ့မယ်.. :)
ကောင်းကင်ပြာ January 12, 2009 at 3:13 AM
ကျေးဇူးတင်တုံး၊တင်ဆဲ၊တင်လတ္တံ ပါ ကိုနေ
၀ှိုက်ဝှိုက် January 12, 2009 at 4:33 AM
၀ှိုက်တို့ရှိတယ်လေ ကျေးဇူးတင်လို့ ညီ့ကိုတောင် မုန့်ဝယ်ကျွေးခိုင်းနေတာ
ဟွန့် ခုထိမုန့်ကျွေးသေးဘူး ဟိဟိ
စိတ်မညစ်နဲ့ ကြိုးစားထား သူများပြောလဲ ဘာဖြစ်လဲ ၀ှိုက်တို့ရှိတယ် သိလား
ကိုတိုး January 12, 2009 at 5:41 AM
ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေ စိတ်မညစ်ပါနဲ့လူတွေဆိုတာက ဒီလိုပဲလေ လိုချင်တာရပြီးရင်တော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတတ်ကျတယ်တဲ့........ဒါပေမဲ့လို့တော့ပေါက်ကွဲသံစဉ်တွေနဲ့ရေးထားတာဆိုတော့လည်းနော်။
ဘာမှာစိတ်မညစ်နေနဲ့ အားလုံးကိုအတိတ်ကကြောင့် ကူညီရတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာထား
ကူညီလက်စနဲ့လိုက်ပြီးကူညီလိုက်..... အားလုံးကို ကူညီတာလည်းကောင်းသောအပြုကိုပြုလုပ်ချင်းပါပဲတဲ့တူလေးရေ........ ဆက်ပြီးတော့ ကူညီလိုက်ပါအုံး..........
thu January 30, 2009 at 6:50 AM
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီနေ့မှလာလည်တဲ့ဧည့်သည်ပါ ။ ဒါပေမဲ့ ဒီစာကိုဖတ်တော့လည်း အစ်ကိုဘက်က ခံစားရတာနားလည်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း အခုမှ လေ့လာနေတာဆိုတော့ အစ်ကိုတို့လို ပညာဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့ ဆိုဒ်တွေလိုက်ရှာရတာပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ အစ်ကိုပြောသလို အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းတော့ ပြောခဲ့တာချည်းပါပဲ။ အစ်ကိုတို့လို လူမျိုးတွေတောင်စိတ်ပျက်တယ်ဆိုတော့လည်း နောက်ဆို အခုလို ပညာရပ်တွေဖြန့်ဝေပေးမဲ့သူတွေ ရှားသွားမှာတောင်ကြောက်ရတယ်ဗျာ ။ နောက်ပြီးကျွန်တော့အနေနဲ့လည်း အစ်ကိုဆီမှာ သိချင်တာတွေမေးချင်သေးတယ်ဗျာ ။ ကျွန်တော်ကတော့ အစ်ကိုဆုံခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းလိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အာမခံရဲပါတယ်ဗျာ ။ နောက်နေ့တွေလည်းလာအားပေးနေမယ်နော် ။
NeverSurrender November 13, 2009 at 10:24 AM
i felt like i m so late to found your site, bro. i really thank u. as far as i have learnt from Buddhist teachings, one who has taught other not for any purpose but with his pure attitude able to know everything by one look in the future. i wish u will be one like that also. hope u all the best. please carry on.
Blog to WordPress ကူးပြောင်းခြင်း
စင်္ကာပူကို ဖုန်း message ပို့ကြမယ်
Nokia, Sony Ericsson ဖုန်းများအတွက် အင်္ဂလိပ်အဘိဓါန်...
ကွန်ပျူတာသမားတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ User Guide စာအ...
ဖုန်းဖြင့် mobile english-myanmar dictionary inst...
Gtalk-online English Myanmar Dictionary
Dial up connection ဖြင့် အင်တာနက်ချိတ်ရအောင် (ထိုင...
ထိုင်းဖုန်းဖြင့် ပိုက်ဆံခိုး(အဲဟုတ်ပါဘူး) ပိုက်ဆံပ...
Internet နာရီဝယ်ကြရအောင် (ထိုင်းနိုင်ငံဖုန်းများအတ...
ထိုင်းဖုန်းတွေ GSM တွေအတွက် Free call လုပ်ပြီးခေါ်ြ...
Recycle Bin(အမှိုက်ပုံး) ဖျောက်နည်း